I-LOOPIMAL, yenza izilwanyana zidanise kwi-app yeveki | IPhone iindaba
UPablo Aparicio | | Iapps zokusebenza, Ukuthengisa
Yiveki kwakhona, sinesicelo esitsha simahla kwiVenkile ye App. Uninzi lwezicelo zonyuselo yimidlalo maxa wambi ekhonza ukonwaba ngamaxesha athile, kodwa le midlalo ayiqhelekanga kwezona zilungileyo kusapho. Ngesi sihlandlo, i usetyenziso lweveki es ITHANDO, Isicelo sabantwana abasusela kwiminyaka emi-6 ukuya kweli-8 ubudala esiya kwenza ukuba abancinci babe ngabachwepheli bezilwanyana.
Yintoni ekufuneka yenziwe ngabantwana kwi-LOOPIMAL? Ewe, ngalo lonke ixesha isicelo siqala, kuvela isilwanyana esahlukileyo kwaye kufuneka benze ntoni yongeza kuluhlu lwamaxesha iintshukumo ezi-5 ezahlukeneyo zokudanisa njengoko kubonisiwe. Igama elithi "loop" kwisihloko likho ngenxa yokuba umdaniso uya kuwuphinda uphinde uphinde ude umntu uwumise, ke banentambo okwexeshana. Kodwa, ngaba ucinga ukuba unokwenza umdaniso wezilwanyana kuphela?
I-LOOPIMAL iya kwenza abantwana ukuba bonwabe ngokwenza izilwanyana ezahlukeneyo zingqungqe
Ngenxa yokuba ukudanisa kungcono kwinkampani, i-LOOPIMAL ikwabonelela nge ukubanokwenza izilwanyana ezine zidanise ngexesha elinye. Isilwanyana ngasinye siya kuba nexesha laso, ke ezincinci ziya kuba nakho ukuthatha isigqibo sokuba zibenza bonke badanise ngokufanayo okanye ngamnye aye kwelakhe. Njengoko benditshilo, abantwana baya kuba ngabacholi beengcali zemidlalo eya kuthi ithathe isigqibo ngendlela izilwanyana ekufuneka zidanise ngayo.
Ngokusengqiqweni, esi sicelo asijoliswanga kum kwaye asibonakali sinomdla kum, kodwa sele ndiyikhuphele kwaye ndayidibanisa ne-ID yam ye-Apple, ukuba uyafuna ukudlala enye yezincinci kwimeko-bume yam. Ukongeza, ukusetyenziswa kweveki kuya kuba njalo simahla Kude kube yiveki ezayo, ke awuzukuchitha nepeni.
NGOKUKHULULEKILEYO YATATOY€ 3,99
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » I-LOOPIMAL, yenza izilwanyana zidanise kwi-app yeveki
Ityala elime ngompu le-iPhone linokucaphukisa